musha nyika dzakabatana Melania Trump Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Melania Trump Biography Chokwadi
Yedu Melania Trump Biography Chokwadi inokupa iwe nhoroondo yeUdiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Upenyu Hupenyu, Mwana, Mararamiro, uye Hupenyu hwePamoyo.
Zvakareruka, iyi Bio inoongorora Hupenyu Hupenyu hwe The Sloin Sphinx, kubva pahudiki hwake kusvika paakava nemukurumbira.
Haisisiri nhau yekuti ndiye mukadzi wemutungamiriri wechi45 weUS, nekudaro, Mukadzikadzi wekutanga weUnited States of America. Nekudaro, vashoma chete vanhu ndivo vane ruzivo rwakajeka nezve Melania Trump's Biography kubva paudiki.
Kuti uve pabasa rako, takagadzirira rondedzero yakajeka uye yakareruka yeHupenyu Hwake Hupenyu. Iye zvino pasina yakawanda ado, ngatitangei.
Nhau yaMelania Trump Yehucheche.
Kutanga, zita rake rezita ndiSloin Sphinx uye aimbove anonzi Melanija Knavs. Melania Trump akaberekwa musi we 26th wa Kubvumbi, 1970 kuna amai vake, Amalija Knavs (née Ulčnik) uye baba, Viktor Knavs kuNovo Mesto, guta riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSlovenia, padyo nemuganhu neCroatia.
YeMangwana US Yekutanga Mukadzi ndiye gotwe pavana vatatu akaberekwa mumubatanidzwa pakati pababa vake wavanotaridzika zvakanaka naamai vake vanotaridzika.
Semusikana mudiki, Melania aive musikana anozvininipisa uyo aive akazvipira kuita mabasa epamba pamwe nasisi vake mukuru, Ines Knauss nemukoma, Denis Cigelnjak. Semwana wekupedzisira akazvarwa uye mucheche wemhuri yekwaKnavs, mudiki Melania aive mhando akawana rudo rwevabereki vake kunyanya amai vake avo vaimbove vagadziri vekupfeka kwevana.
Melania Trump Mhuri Dzinobva:
Rudzi rweMukadzi wekutanga hariratidze huchokwadi hwenhoroondo yedzinza rake. Nekufamba kwenguva, vanhu vakatenda kuti Melania ine imwe dhigiri yemadzinza eAustria. Nekudaro, humbowo hwesarudzo iyi hahuna chokwadi.
Chokwadi ndechekuti, dzinza revabereki vaMelania Trump nderimwe remanyuko echokwadi ekutsvaga kwake Mhuri Midzi. Vese amai vake nababa maSlovenia vanotaura mutauro weBajo Carniola Slovenian.
Melania Trump Mhuri Yemhuri:
Unoziva here?… Melania Trump akakurira mumhuri ine vanhu vanozvininipisa uye vepakati nepakati. Kuzvarwa mumusha wemugadziri wekupfeka, akakurumidza kutora hushoma hunyanzvi muchiitiko chekupfeka kubva kuna amai vake.
Nekuda kwekugara kwamai vake, Melania akazobatanidzwa zvizere mumafashoni mazhinji akarongeka kuratidza zvipfeko zvevana. Kare ikako, iye neshamwari dzake diki vaigara vachinakidzwa nekutora chikamu mumafashoni show sezvo ivo vaibatwa nekukoshesa nekuremekedza. Pachinyorwa ichi, Melania Trump akatanga modelling aine makore mashanu.
Melania Trump Kurarama Kwepfuura Nyaya- Izvo Zvazviri:
Mazuva apakuvamba eMelania ndeimwe angatsanangurwa sedrama rakanyorwa rinozadzwa nekusagadzikana uye chinhu chinonakidza. Akarererwa mumusha unogara Sevnica padhuze nevanun'una vake.
Nekuda kwenhengo yababa vake kuLigi yevaKomonisiti veSlovenia, mudzimai wekutanga weUmberi weU.S. akabhabhatidzwa muchivande semukatorike. Muchokwadi, vese vabereki vaMelania Trump vaisakwanisa kuratidza pachena kutenda kwake muChiKristu sezvo Chikwata chakabatana zvakanyanya nekusatenda kuti kuna Mwari.
Melania Trump Dzidzo:
Sezvo mamiriro ezvemari emhuri Yake anogadzikama, Melania nevese Imba yavo vakatamira kune imwe nhurikidzwa mbiri muSevnica. Nekudaro, mhuri yake yakakurumidza kutamira kune chimwe chivakwa chakakwira uye ndokugara ikoko iye achienda kuchikoro.
Vechidiki lass vakapinda Sekondari Chikoro Chemagadzirirwo uye Photography muLjubljana. Chikoro chakamubatsira kuti awane nzwisiso iri nani yemafotohoot nokudaro achiwedzera ruzivo rwake mukumodelling.
Mukuda kwake kuwana rakabudirira zvedzidzo, akaenderera mberi akanyoresa kuYunivhesiti yeLjubljana, kwaakadzidza hunyanzvi uye dhizaini.
Melania Trump Kwekutanga Basa Roupenyu:
Asati anyoresa paYunivhesiti, Melania akasaina chibvumirano neiyo yekuenzanisira karaiti iri muMilan. Akasimbisa chibvumirano aine makore gumi nemasere. Nekudaro, aive aine nguva yakaoma yekuisa pfungwa pazvidzidzo zvake pamwe nekuenzanisira panguva imwe chete.
Unoziva here?… Melania Trump akapedza gore rimwe chete kuYunivhesiti asati asiya chikoro. Nekuda kwechishuwo chake chekutarisa zvakanyanya pabasa rake rekuteedzera, Melania akafunga kuti zvakakosha kusiya chikoro. Nekudaro, akasiya University uye akatsvaga kugadzirisa pane rake modelling basa.
Melania Trump Biography - Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau:
Zvakatora Melania kushinga kukuru kuti asiye Chikoro. Nekudaro, iwo maonero ake uye zvaakakosha kuti aite semuenzaniso hazvina kukanganiswa. Munguva pfupi, akatanga kutevedzera dzimba dzefashoni muMilan neParis.
Mugore ra1995, mukana wakanaka wakazviratidza kuMelania. Akave nerombo rekusangana naPaolo Zampoli, mwene wemubati weMetropolitan Models uye shamwari ya Donald Trump. Akamukurudzira kuti aende kuUnited States sezvo mikana yakawanda yekuenzanisira iripo mumatunhu. Ehe, akabvuma kukurudzira kwake uye akaenda kuUS gore rakatevera.
Melania Trump Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Pakasvika nguva Melania Trump asvika kuUnited States, anga atoisa pamapeji ekuvhara emagazini akakurumbira se; Vogue, Front, Fair, uye Vanity. Makore mashoma gare gare, Akatanga mutsetse wake wejecha, achizviisa mune rebhizimusi.
Waizviziva here?… Melania Trump akatamira kuU.SA ari vhiza remushanyi asati awana H-1B vhiza rebasa. Zvisinei, zvipo zvake mumunda wemuenzaniso zvakamupa kodzero yekugara zvachose kuburikidza neEB-1 chirongwa. Chirongwa ichi chakagadzirirwa kubatsira vashandi vekunze vane hunyanzvi hunoshamisa kuti vagare kugara zvachose muUnited States. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Melania Trump Vanoda Hupenyu:
Kugara muUS zvechokwadi kwakaunza mimwe mikana kuna Melania uyo akakurumidza kusangana naDonald Trump munaGunyana 1998. Pakasvika nguva iyoyo, Donald Trump aive achifamba nenzira yekuramba mukadzi wake wechipiri, Marla Maples. Nokukurumidza akapedzisa kurambana muna1999 uye akatanga kudanana naMelania mushure.
Muchato waMelania Trump:
Mushure mekufambidzana kwenguva yakati rebei, Melania uye Donald Trump vakavimbisana muna 2004. Vakaramba vachikura murudo kudzamara vaviri vaita sarudzo inoshandura hupenyu yekuroora. Pana 22nd zuva raNdira 2005, VaTrump naMelania vakaroora muEpiscopal Chechi yeBethesda muFlorida.
Unoziva here?… Vazhinji vane mukurumbira vakaita kuti vawanike pamuchato waMelania naTrump. Hunhu hwakakurumbira senge Shaquille O'Neal, Hillary Clinton, Bill Clinton, Katie Couric, Simon Cowell, Kelly Ripa, naRudy Giuliani vakapinda muchato. Imba yavo inoroora wekutanga muchato waMelania uye wechitatu waDonald Trump. Nekudaro, Melania Trump akaroora panguva yekunyora iyi Biography.
Vana vaMelania Trump:
Imwe yeminamato yekutanga uye zvido zvevakaroora ndeyekurera imba inofara nevana vakanaka. Saizvozvo, Melania aidawo kuve amai mushure memuchato wavo. Nemusi wa20 Kurume 2006, akabereka mwanakomana wake wedangwe, akatumidzwa kuti Barron William Trump.
Melania Trump; Mukadzi Wekutanga weUnited States:
Kutevera kufungidzirwa kwemurume wake muhofisi yeMutungamiriri weUS, Melania Trump akave Mukadzi wekutanga weUS. Uyezve, ndiye wechipiri munhu werudzi rwekunze kubata zita racho. Akatora chinzvimbo cheMutungamiri Chekutanga musi wa20 Ndira 2017.
Melania Trump Hupenyu hwemhuri:
Iyo nzira yekuenda kune stardom ingadai isina kunakidza pasina rubatsiro rwemhuri yake. Nekuda kwekutsigirwa neMhuri yake, yedu yeSlovenia -American modhi yakaita zvakawanda zvakaitwa. Muchikamu chino, tichakupa rumwe ruzivo nezvevabereki vaMelania Trump kutanga naamai vake.
Nezve Melania Trump Amai:
Imwe yeye isingakanganwike Yekurangarira yehudiki yaMelania inguva dzekufara dzaakange achifarikanya achitora chikamu mumafashoni, zvese nekuda kwamai vake Amai vaMelania Trump, Amalija Knavs, akazvarwa pazuva re9th raJuly 1945. Aive mugadziri wepateni weiyo Yevana Yekupfeka Kugadzirwa.
Nezve Melania Trump Baba:
Humwe hunhu hwakatamba basa rakakosha muMelania Trump Hupenyu Hupenyu ndibaba vake. Baba vaMelania, Viktor Knavs, akazvarwa musi we24th waMarch 1944. Aishanda semotokari uye mutengesi wemidhudhudhu kune anogadzira mota. Shure kwaizvozvo, Viktor akave nechokwadi chekuti akapa izvo zvinodiwa nemhuri yake uye akatsigirawo vana vake musarudzo dzavakaita kuburikidza nehupenyu.
Nezve Melania Trump Vanun'una:
Melania Trump ane vakoma vaviri; hanzvadzi mukuru, Ines Knauss, uye mukuru mukoma-mukoma, Denis Cigelnjak. Zvisinei, anonzi haana kusangana nemunun'una wake kubva paakazvarwa. Zvisinei, hanzvadzi yake huru, Ines, muimbi uye yakamutsigira zvikuru mukuita kwake kose basa.
Nezve Hama dzaMelania Trump:
Sekuru vababa veMelania ndiJožef Knavs apo sekuru vake baba ndiAntonija Ribič. Uyezve, vanasekuru nasekuru vake ndiAnton Ulčnik naAmalija Gliha. Melania akaita nhamburiko yekuita zvakavanzika, ruzivo nezvake maunununa naamainini pamwe nevazukuru vake pamwe nababamunini.
Melania Trump Hupenyu Hwega:
Kunze kwekuita kwake kwekuenzanisira, Melania anova nechokwadi chekuzvichengeta akabatikana pane zvimwe zvikamu zvehupenyu hwake. Paaitaura nezvezvaaifarira, akataura kuti zvaainofarira kuita zvinosanganisira Pilates uye kuverenga magazini.
Kutarisa mukati meHoroscope yake kunoratidza kuti zvechokwadi akagara nhaka humwe hunhu hweZodiac hunhu hwake. Her Persona isanganiswa yeiyo Taurus Zodiac chiratidzo. Naizvozvo, akangwara, akazvipira, anoshanda nesimba, uye akavimbika. Ndosaka Melania achinyora kubudirira kukuru kubva paakakwidza Mukurumbira.
Melania Trump Mararamiro:
Sekureva kwaHumannetworth, Melania Trump's Net Worth inofungidzirwa kuti inosvika madhora makumi mashanu emamiriyoni. Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva kumodelling yake uye neJewelle Line. Uyezve, bvunzo yake yemafashoni inokudzwa nevazhinji vateveri vake. Nekudaro, anorarama hupenyu hwoumbozha.
Imba yaMelania Trump neMota:
Kunyangwe pakange pasina ruzivo chairwo rwekuunganidzwa kwemotokari yeMelania Trump, iye ane mabhasikoro mazhinji akanaka. Kune mukadzi wechikadzi chake, Melania Trump akaonekwa mumotokari dzakasiyana dzinodhura pane dzinoverengeka.
Panguva yekumisikidza Bio yake, Mukadzikadzi wekutanga weUnited States anogara muWhite House nemurume wake, VaDonald Trump. Kupesana nezvakafungidzirwa nevanhu vazhinji, zvakatora Melania imwe nguva asati aenda kuWhite House.
Chokwadi ndechekuti, akambofunga kugara muNew York City nemwanakomana wake, Barron. Sarudzo yaMelania yekugara kumashure yakaitwa kuti ikwanise mwanakomana wake kupedzisa zvidzidzo zvake kuUpper West Side yeManhattan.
Melania Trump Chokwadi:
Kuputira iyo biography yeMukadzi wekutanga, hezvino zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi izvo zvingakubatsire iwe kuti unzwisise kwake Biography.
Chokwadi # 1 - Kudya kwaMelania Trump:
Muenzaniso weSlovenia-yekuzvarwa haaseke nekudya kwake sezvo ichiita basa rakakosha pakuchengetedza ganda rake. Iye anodya antioxidant-hupfumi muchero kuti ape ganda rake rinotaridzika.
Pane zvakawanda Melania ane hanya nechitarisiko chake, haazvinyime pachikafu chine shuga uye zvekudya. Sezvineiwo, uyu ane mukurumbira anodya chokoleti. Uyezve, Melania anonwa mvura yakawanda uye anodya maveji pamwe chete nezvikafu zvine zvine mwero.
Chokwadi # 2 - Chisingadaviriki Chitendero Chechokwadi:
Unoziva here?… Melania Trump akasimbisa kuti muKaturike. Chokwadi ndechekuti, ndiye wechipiri muKaturike kutora chinzvimbo cheMukadzi wekutanga weUnited States of America. Uyezve, ndiye wekutanga muKaturike mushure maJohn F. Kennedy nemukadzi wake kugara muWhite House.
Chokwadi # 3 - Ugari hweUS:
Melania aigara achigara muUnited States aine vhiza yekugara zvachose. Nekudaro, mu2006, akawana ugari hweAmerica, zvichimuita iye mugari wekutanga akasarudzika kutora chinzvimbo cheUS First Lady. Mugore ra2018, vabereki vake vakawanawo ugari hwemuUS kuburikidza nemaitiro anozivikanwa seChinese Kutama.
Melania Trump Biography Pfupiso:
Pazasi peiyo wiki ruzivo ruzivo rweSlovenia-yakazvarwa modhi. Tafura yacho ichakubatsira iwe kuwana ruzivo nezve iye muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi;
Zita rizere: Melanija Knavs
Nick Zita: The Sloin Sphinx
Akazvarwa: 26th April, 1970
Nzvimbo Yokuzvarwa: Novo Mesto, Slovenia
Baba: Viktor Knavs
Amai: Amalija (née Ulčnik) Knavs
Vanun'una: Sekuru hanzvadzi; Ines Knauss.
Chembere hafu-mukoma; Denis Cigelnjak
Vanasekuru Vanasekuru: Anton Ulčnik naAmalija Gliha
Vanasekuru Vanababa: Jožef Knavs naAntonija Ribič
Murume: Donald Trump
Mwanakomana: Barron William Trump
kukwirira: 1.8m (5 ′ 11 ″)
Sezvo chirevo chichienda; rwendo rwemakiromita ane chiuru runotanga netsoka. Melania Trump's Biography inoratidza kuti apfuura nemamiriro akasimba uye akaomarara kubva pamazuva ake eUdiki.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paMelania Trump Biography uye Yehucheche Nyaya, vagadziri vedu vaive vakatarisa kururamisa uye kururamisa. Ndokumbira kuti uise zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezve aimbove modhi uye bhizimusi mukadzi.